२०७४ चैत्र १२ गते १०:४५
सफल विद्यार्थीका १० बानी
१) व्यवस्थित हुनुहोस्– आफूले गर्न खोजेको कामको योजना बनाउनुहोस्। के गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने जस्ता कुरालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ। यसले तपाईंलाई जिम्मेवारी बनाउनुका साथै अघि बढ्न पनि मद्दत गर्छ। २) एकैपटक धेरै काममा हात नहाल्नुहोस्– अध्ययनहरूले भनेका छन् कि धेरै कामहरू एकैपटक था ...
२०७४ चैत्र ११ गते २०:०८
अस्थायी शिक्षक परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । दुई पटकसम्म स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ । गत वर्षात्‌मा तराईको बाढी र भदौमा शिक्षकहरूको असन्तुष्टिका कारण देखाएर रद्द गरिएको परीक्षा आयोगले आगामी चैत २३ मा लिने भएको छ । ‘परीक्षाको सबै तयारी ...
२०७४ चैत्र ९ गते ०८:२२
आमाछोरीले सँगसँगै दिए एसइई
सर्लाही । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७४ अन्तर्गत सर्लाहीको एक परीक्षा केन्द्रमा आमा र छोरीले सँगसँगै परीक्षा दिएका छन् । चक्रघट्टा गाउँपालिका–७, सगरदिना निवासी मन्तोर देवी राम र उनकी छोरी आरती कुमारीले देवधारी उमावि सुन्दरपुर सुखचैना परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएका हुन्। जनत ...
२०७४ चैत्र ९ गते ०८:००
रूपन्देही निरन्तर उत्कृष्ट
बुटवल । ०५६ सालमा रूपन्देहीका विद्यार्थी मनोज बोहोरा एसएलसी परीक्षामा नेपाल प्रथम बने। न्यु होराइजनका विद्यार्थी मनोज नै लुम्बिनी क्षेत्रकै पहिलो बोर्ड फस्ट हुन्। सम्भवत : पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा तेस्रो बोर्ड फस्ट विद्यार्थी।मनोजले एसएसली टप गरेको १८ वर्ष पुग्यो। त्यसयता रूपन्देहीले विद्य ...
२०७४ चैत्र ९ गते ०७:४९
हाँस्दै, खेल्दै, सिक्दै
काठमाडौं । रिस्ता अधिकारी अहिले ५ वर्षकी भइन्। उनी बालाजु डाँडागाउँस्थित हिम रस्मी स्कुलमा एलकेजीमा पढ्छीन्। उमेरले सानै भए पनि उनी निकै बुझकी र अनुशाशित छिन्। रिस्ता आफ्नी आमाबाबालाई धेरै माया गर्छिन्। घरमा बसेको बेलामा आमालाई घरको काम पनि सघाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ। अरु काम मात्रै नभई कहि ...
२०७४ चैत्र ८ गते ०९:३९
आजदेखि एसईई परीक्षा शुरु, झण्डै पाँचलाखले परीक्षा दिँदै
काठमाडौँ । आजबाट देशभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरु भएको छ । परीक्षाको पहिलो दिन बिहीबार विद्यार्थीले बिहान ८ बजे देखि अनिवार्य अंग्रेजी र वेद विद्याश्रम तर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको परीक्षा दिइरहेका छन् । परीक्षामा ७७ वटै जिल्लाका ९ हजार ९ सय ८८ विद्यालयका ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ विद ...
२०७४ चैत्र ७ गते २२:२६
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक विज्ञापनका सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार किन विज्ञापन नगरी ऐन संशोधन गर्नु परेको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेशको लिखित जवाफ विहिवार पठाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अस्थायी शिक्षकहरुलाई २०६६ को सर्वोच्चको आदेश अनुसार व्यवस्थापन नगरी किन ऐनको नवौं संशोधन ...
२०७४ चैत्र ७ गते २०:१८
शिक्षक संघका अध्यक्ष पौडेललाई एकजना शिक्षकको २० प्रश्न
दीपकचन्द्र ओझा सर्वप्रथम त नेपाल शिक्षक संघको संघीय कार्यसमतिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा राजेन्द्रराज पौडेलज्यू निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक तथा शिक्षकहरुको पेशागत संस्था हो । विभिन्न गुट उपगुटमा ...
२०७४ चैत्र ७ गते ०७:४७
काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आगामी परीक्षा विषयगत रूपमा लिने गरी तयारी अघि बढाएको छ । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विषयगत रूपमा लाइसेन्स पाउनेछन् । त्यसैका आधारमा उनीहरूले अध्यापन गराउन पाउनेछन् । आयोगका प्रशासकीय अधिकृत ...
२०७४ चैत्र ७ गते ०७:२८
काठमाडौं । विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दर्ता गराएको अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागमै फिर्ता पठाएको छ। ठगीअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्र ...
२०७४ चैत्र ७ गते ०७:२२
जहाँ ७७ जिल्लाकै विद्यार्थी पढ्छन्
काठमाडौं । काठमाडौंमा एउटा यस्तो विद्यालय छ, जहाँ ७७ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन् । काठमाडौंका धनाढ्यदेखि सामान्य किसानका छोराछोरीसम्मले अध्ययन गर्ने विद्यालय हो, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित बूढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय । यो विद्यालयमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले पनि पढेका थिए। देशकै न ...
२०७४ चैत्र ७ गते ०७:१७
बढ्यो स्ववियु चुनावको रौनक
लेखनाथ । पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । चैत २१ का लागि तोकिएको चुनाव पहिलोपल्ट हुन लागेकाले पनि विद्यार्थीहरू उत्साही छन् । विद्यार्थी संगठनका तुल, ब्यानर र झन्डाले क्याम्पस रंगीचंगी देखिएको छ । बिहानको चियादेखि ...
२०७४ चैत्र ६ गते २२:५५
काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन महिना दिन बाँकी छ । तर, यतिखेरै अभिभावकहरू ‘राम्रो स्कुल’ खोज्दै आफ्ना छोरा/छोरीलाई भर्ना गराउन व्यस्त छन् । जाँच लिएरै भर्ना गर्ने भनेपछि अभिभावकले हप्तौदेखि नानीहरुलाई यी स्कुलका लागि जाँचको पूर्वतयारी गराएका छन् । तर, आफूले चाहेको विद्यालयम ...
२०७४ चैत्र ६ गते २२:१८
चैत २३ को परीक्षा स्थगित गर्न नेपाली सेनाको सहयोग मागिने
काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले चैत २३ गतेको परीक्षा स्थगित गर्न नेपाली सेनासँग सहयोग माग्ने भएका छन् । सरकारले २०६६ माघ २४ को सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम विज्ञापन नगरेर अस्थायी शिक्षकहरु माथि अन्याय गरेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले न्यायका लागि नेपाली सेनाको गुहार माग्ने भएका हुन् । अस्थायी शिक्षक ...
२०७४ चैत्र ५ गते २२:०२
जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल खारेज नहुने
काठमाडौं । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु तत्काल खारेज नहुने भएका छन् । आगामी चैत्र २८ गतेपछि जिल्ला शिक्षा खारेज हुने भनिएपनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगरिने जनाएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले चैत्र २८ मै जिल्ला शिक्षा क ...
२०७४ चैत्र ५ गते १२:१०
सवा लाख युवालाई सीप दिन ६ अर्बको कार्यक्रम
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट दोस्रो)ले एक लाख १५ हजार युवालाई सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने भएको छ । नतिजा र भौचरमा आधारित तालिम दिएर सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । इभेन्ट परियोजनाका निर्देशक टेकनारायण पाण ...
२०७४ चैत्र ५ गते ११:०८
‘अदालतको आदेश बाहेक अन्य कुनै कारणले परीक्षा रोकिन्न’
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा सञ्चालनमा बाधा हुने गरी कतैबाट अवरोध नभएको जनाएको छ । परीक्षा निर्धारित समयमै हुनेसमेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलिया परीक्षा नै स्थगित हुनेगरी कतैबाट समस्या नआएको भन्दै सानातिना अवरोधहरु छिचोल्दै परीक्षा न ...
२०७४ चैत्र ५ गते १०:४३
३७ वर्षसम्म स्थायी तर पाएनन् पेन्सन
रोशन क्षेत्री गाउँले /काठमाडौं आदर्श मावि परासी, नवलपरासीका लेखापाल चन्द्रभुषण उपाध्यायले २०३५ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति लिनुभयो । २०३५ सालमा विद्यालयमा नियुक्त हुनुभएको उहाँले २०३७ असार ७ गते जिल्ला शिक्षा आयोगमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । पछि उहाँलाई तत् ...
२०७४ चैत्र ५ गते १०:१७
काठमाडौँ । सरकारले दुई वर्षदेखि कक्षा १० मा अनुत्तीर्ण हुने प्रणाली खारेज गरेर ग्रेडिङबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गर्‍यो । शिक्षामन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले यो प्रणालीमा कोही पनि फेल नहुने हल्ला चलाए । परीक्षा दिएका सबैले पढ्न पाउने प्रचार गर्न पनि भ्याए । तर, त्यसयता विद्यार्थी र शिक्षक ...
२०७४ चैत्र ५ गते १०:०९
एसईईमा ४ लाख ८५ हजार परीक्षार्थी
काठमाडौँ । चैत ८ देखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित यो पहिलो परीक्षा हो । बोर्डका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने परीक्षामा ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । एक हजार ९ सय ५६ परीक्षा ...
२०७४ चैत्र ४ गते १४:१०
शिक्षक संघको अध्यक्षमा पौडेल निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र राज पौडेल निर्वाचित भएका छन् । पौडेलले अध्यक्षमा केशव निरौलालाई पराजित गरेका हुन् । संघको आठौं महाधिवेशनमा पौडेल र निरौला समुह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पौडेल समुहका अधिकांश विजयी भएका हुन् । पौडेलले ३२४ मत ल्याउदा निरौलाले २५६ मत मात्रै पा ...
२०७४ चैत्र ४ गते १०:१३
शिक्षक संघको प्रारम्भिक मतपरिणाममा पौडेल समुह अगाडी
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघको आठौं संघीय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्रारम्भिक मतपरिणाममा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार राजेन्द्रराज पौडेल समुह अगाडी देखिएको छ । शनिवार भएको निर्वाचनमा कुल मतदाता ६१० रहेकोमा ५८८ मत खसेको थियो । ६५ मत ...
२०७४ चैत्र ४ गते ०८:३२
निमित्तको भरमा आयुर्वेद क्याम्पस
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पस ९ महिनादेखि निमित्त प्रमुखमा सञ्चालन भइरहेको छ । निमित्तको जिम्मेवारी छोटो अवधिका लागि दिइने चलन छ । तर ९ महिनादेखि निमित्तका भरमा चल्दै आएको यो क्याम्पसमा फेरि तीन महिनाका लागि निमित्तकै जिम्मेवारी थप गरिएको छ। योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा वरिष्ठल ...
२०७४ चैत्र ४ गते ०८:३०
विद्यालयले उठाएको परीक्षा शुल्क मेयरको निर्देशनपछि फिर्ता
रौतहट। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाएको परीक्षा शुल्क फिर्ता गरेका छन्। नगर प्रमुख सन्तोष मेहताले नगरको कक्षा १ देखि १० सम्मका सम्पूर्ण छात्रछात्राको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था नगरपालिकाले व्यहोर्ने बताएपनि केही विद्यालयले आफूखुसी विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्कको नाममा रकम असुल ग ...
२०७४ चैत्र ४ गते ०८:१४
बदलिँदै पाठ्यक्रम : कक्षा १ र ११ को पुस्तक यसै वर्ष फेरिने
काठमाडौँ  । कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि संघीय संरचनाअनुकूल हुने गरी विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको हो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम ...
२०७४ चैत्र ४ गते ०७:५४
शिक्षक संघको निर्वाचनमा चार प्रदेशको मतपरिणाम यस्तो छ
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघको आठौं संघीय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । मतपरिणाम अनुसार संघको अध्यक्षमा केशव निरौला र राजेन्द्र राज पौडेलका बीच तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । शनिवार भएको निर्वाचनमा कुल मतदाता ६१० रहेकोमा ५८८ मत खसेको थियो । प्र ...
२०७४ चैत्र ३ गते २१:२२
शिक्षक संघको निर्वाचनमा ९७ प्रतिशत मत खस्यो
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघको आठौं संघीय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा ९७ प्रतिशत मत खसेको छ । संघको अध्यक्षमा केशव निरौला र राजेन्द्र राज पौडेलका बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । कुल मतदाता ६१० रहेकोमा ५८८ मत खसेको निर्वाचन कमिटिले जनाएको छ ।केहीबेरमा मतगणना शुरु हुनेछ । नेपाल शिक्षक ...
२०७४ चैत्र ३ गते १६:२५
शिक्षक संघमा भड्किलो प्रचारप्रसारका बीच मतदान शुरु, को होला अध्यक्ष ?
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक संघको आठौं महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयनका लागि मतदान शुरु भएको छ । दिउँसो ४ बजे देखि मतदान शुरु भएको हो । हाल मतदान जारी रहेको छ । मतदान सम्पन्न भएर आजै मतगणना शुरु हुने र मध्यरासम्ममा नतिजा आइसक्ने शिक्षक संघले जनाएको छ । मतदानमा कुल ५८५ मतदाताहरु सहभागी हुने संघले जनाएक ...